Mogadishu Journal » 2014 » January » 10
The United Nations Refugees Agency started collecting photos both Refugees/Asylum -seekers and the reason is to mobilize and making black income in the names of the Refugees in this World.The staff of the UNHCR are claiming they are working as Humanitarian and Volunteers to the...
Mjournal : — Saraakiisha dowladda Kenya ayaa war laga soo xigtay waxaa ay ku sheegeen in ay duqeyn dhinaca cirka ah oo ay ka fuliyeen daafaha degmada Garbahaarey ku dilleen 30 ka tirsan dagaalyahannada Al-shabaab. Mid ka mid ah warbaahita dalka Kenya oo xigatay sarkaal ka...
Wafdiga Somaliland oo Addis Ababa kula kulmay madaxweyihii hore ee Nigeria
Mjournal : — Xubanaha wafdiga uga qeyb-gallaya wada hadallada maamulka Soomaaliland uu la leeyahay dowladda dhexe oo ku sugan magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ayaa waxaa ay halkaa kula kulmeen madaxweynihii hore ee dalka Nigeria Olusẹgun Obasanjo. Xubnaha ay is...
Faah faahin dheeraad ah oo ka soo baxeysa duqeyn dhinaca cirka ah oo ay geysteen diyaaradaha dagaallka Kenya
Mjournal : — Faah faahin dheera ah ayaa ka soo baxaya duqeyn dhinaca cirka ah oo ka geysteen qeybo ka mid ah gobolka Gedo, diyaaradaha dowladda Kenya oo weerar ku qaaday saldhigyo ay lahaayeen A-shabaab. Wararku waxaa ay sheegayaan in duqeynta lagu bartilmaameesaday...
Ciidamada dowladda oo qabtay mid ka mid ah rag xalay weeraray saldhiga degmada Huriwaa
Mjournal : — Ciidamada dowladda Soomaaliya ee fadhigoodu yahay degmada Huriwaa ayaa lagu waramayaa in ay ku guuleysteen qabashada mid ka mid ah kooxo hubeysan oo xalay weerar ku qaaday saldhiga degmada. Kooxo hubeysan ayaa xalay saqdii dhexe weerar culus waxaa ay ku qaadeen...
Madaxweynaha Puntland oo sheegay in uu ka shaqeynayo dib u soo laabashada xiriirka Puntland iyo dowladda dhexe
Mjournal : – Madaxweynaha dhawaan la doortay ee Puntland Pro C/wali Max’ed Cali Gaas oo wareysi siinayay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da, ayaa sheegay in uu si dhaw uga shaqeyn doono hagaajinta xiriirka kala dhaxeeya maamulka dowladda federaalka. ...
Kenya oo sheegatay mas’uuliyada duqeymo cirka ah oo lagu qaaday saldhigyo Al-shabaab ku leeyihiin Gedo
Mjournal : — Saraakiisha dowladda Kenya ayaa sheegtay in ay ka danbeeyeen weerar dhinaca cirka oo ka dhacay deegaanno hoos taga gobolka Gado, gaar ahaan saldhigyada Al-shabaab ay ku leeyihiin daafadaha degmada Garbahaarey. Wararku waxaa ay sheegayaan in diyaaradaha dowladda...
Kooxda Banadir Sports Club oo ka mida kooxaha ugu ad adag dalka ayaa hogaanka u qabatay horyaalka heerka 1-aad ee Nation Link Telecom Championship, kaddib markii ay 1-0 kaga adkaatay Naadiga ciidanka Booliska Soomaaliyeed ee Heegan cayaar ka dhacday garoonka Banadir Stadium....